Soosaarayaasha Rakhuuda ah ee Farsamo Yaqaan Leh Qaybiye Mashiinno iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Kala-bixiyaha Sieving Solid-dareere adag?
Waa qalab loogu talo galay ilaalinta deegaanka oo loogu talagalay saxarada fuuqbaxa digada digaaga. Waxay u kala sooci kartaa wasakhda wasakhda ah iyo tan xaarka wasaqda xoolaha una geyn kartaa bacrimin dabiici ah iyo bacrimin adag oo dabiici ah Bacriminta dareeraha ah ee dabiiciga ah ayaa loo isticmaali karaa ka faa'iideysiga dalagga ka dib markii la khamiiriyay, iyo bacriminta adag ee dabiiciga ah ayaa loo isticmaali karaa aagga bacriminta la'aanta taasoo hagaajin karta qaab dhismeedka carrada. Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale la samayn karaa bacriminta isku dhafan ee dabiiciga ah. Bamka dareeraha ah ee taageera ayaa loo isticmaalaa in lagu diro biyaha asalka u ah kala-soocaha, walxaha adag (digada qallalan) waa la soo saaray oo lagu kala soocay wareegga wareegga ee shaashadda la geliyay, dareerahana wuxuu ka soo baxayaa marinka shaandhada.
Qaab-dhismeedka nooca Sieve Sieve Separator Nooca adag-dareeraha ah
Ku Kala-goynta Sieving Solid-dareere ah waxaa badanaa laga sameeyaa shaandho, winch muquun ah iyo daab muquun ah, oo ka sameysan tayo sare 304 ahama iyo alloy ka dib geedi socodka gaarka ah. Waxay leedahay iska caabin daxalka wanaagsan oo xirta iska caabin. Waxay leedahay 2-3 jeer oo adeeg wiish ah marka la barbar dhigo waxyaabaha la midka ah.
Astaamaha Sieving Sieving Separator Solid-dareere ah
Hawlaha dejinta ee kala-soocida kala-soocida adag ee dareeraha ah ayaa dhameystiran oo la bartilmaameedsanayaa. Naqshadeynta mashiinka oo dhan wuxuu isku daraa nidaamka bamgareynta digada, nidaamka gariirka, nidaamka extrusion iyo nidaamka sifeynta otomaatiga ah, taas oo hagaajinaysa awooda daaweynta iyo saameynta daaweynta.
1. Waa jiil cusub oo ah qalabka ilaalinta deegaanka ee qashinka lagu shubo.
2. Si wax ku ool ah loogu daaweeyo qashinka digada xoolaha iyo beeraha digaagga kala saarida dareeraha adag.
Faa'iidooyinka Kala-soocida Sieving Sieving Solid-dareere adag
1.Waxay leedahay howsha kala soocida iyo kala shaandhaynta qaybo waaweyn marka hore, waxayna isku darsamaysaa hawlo badan sida gudbinta, riixitaanka, fuuqbaxa iyo ka saarida ciida si loo xaliyo dhibaatooyinka qalabka qashinka lagu wareejiyo iyo howlgalka hawada.
Qiyaasta kala soocida ee sabeynta, arrinta la joojiyay iyo jiinka qashinka ayaa ka badan 95%, iyo waxyaabaha adag ee qashinka ka badan 35%.
3.Waxay leedahay shaqo xakameyn heer dareere ah oo otomaatig ah, taas oo keydineysa in ka badan 50% isticmaalka tamarta marka loo eego qalabka la midka ah, qiimaha hawlgalka oo hooseeya.
4.Qeyb ka mid ah qalabka lala xiriirayo qalabka wax lagu farsameeyo ayaa ka sameysan bir bir ah oo tayo sare leh isla markaana waxaa lagu dhajiyay pickling.
Muuqaal Muuqaal Qalalan-dareere ah oo jilicsan
Xulashada Qaabdhismeedka Sieving Solid-dareere ah
Xuduudaha aasaasiga ah waa sida soo socota:
Awood (m³ / h)
Hore: Mashiinka Difaaca Bacriminta Joogtada ah
Xiga: Khadadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah